Saturday March 21, 2020 - 20:04:29
Si lama filaan ah ayay diyaarad ay leedahay dowladda Xabashida Itoobiya ugasoo degtay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in diyaaradda Ethiopian Airline ay maanta soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Cigaal, diyaaradda ayaa magaalada Addis Ababa kasoo qaadday dad rakaab ah.
Wararka ayaa sheegaya in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airline ay si caadi ah uga shaqeyn doonto madaarka magaalada Hargeysa, Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo ah wasiirka arrimaha dibadda maamulka 'Somaliland' oo socdaal ku jooga magaalada Addis Ababa ayaa la sheegay in uu kaalin weyn ku lahaa sidii shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airline dib uga shaqa bilaabi laheyd deegaannada 'Somaliland'.
Dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah ujabisay amarkii kasoo baxay DF-ka ee lagu mamnuucay in diyaaradaha caalamiga kasoo degaan garoomada dalka muddo 15 maalmood gudahood ah, xukuumadda Addis Ababa ayaa maamul goboleedyada dalka ka jira u aqoonsan dowlad madax banaan waxayna qeyb ka tahay siyaasadda qeybi oo xukun.
Al Shabaab oo weeraray saldhig kuyaal duleedka magaalada Boosaaso.
Dab khasaare hantiyadeed geystay oo ka kacay suuq kuyaal magaalada Boosaaso.